भनिन्छ ‘हरेक चोटले ठूलो अवसर बोकेर आएको हुन्छ ।’ जिन्दगीमा हामी एउटा ढोका बन्द भयो भनेर रुन्छौं, चिच्याउँछौं, ‘डिप्रेस’ हुन्छौं । तर, अरू तीनवटा खुला ‘द्वार’ देख्दैनौं । शुरुवाती दिन यस्तै थिए कष्टकर । ३७ वर्षअघि । सन्तान जन्मिँदा छरछिमेक मात्र होइन, गाउँभर हल्ला हुन्थ्यो । विशेष खुशीयालीको माहोल छाउँथ्यो । तर, सुशिला ढकालको जन्मले घरमा खुशी आएन । बरु चिन्ता बढायो । कारण थियो–… विस्तृत समाचार
सरल छैन जिन्दगीको रेखा । लाग्छ, जिन्दगी नसोचेको ‘यथार्थ’ हो । सोचेको कुरा नहुने र नपुग्ने अनि नसोचेको कुरा भोग्नुपर्ने । पर्सामा जन्म । एक भाइ र एक दिदी बीचको म । आयस्रोतको अन्य माध्यम केही थिएन । थियो त खेतीपाती । पर्साबाट वीरगञ्ज बसाइ स¥यौं । पिताजीले किराना पसल चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । ०६६ सालमा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ज्ञानबाटिका… विस्तृत समाचार
कथाहरू अचेल घरघरमै भेटिन्छन् । कति लेखिन्छन् । कति मनमै गुम्स्याएर राखिन्छन् । भनिन्छ, श्रीमान्को सफलताको पछि श्रीमतीको महत्वपूर्ण हात हुन्छ । तर, त्यही श्रीमतीका कारण जीवनमा धेरै आँसु बहाउन विवश पात्रहरू भेटिन थालेका छन्, दुर्गम गाउँ बस्तीमा । भनिन्छ, जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहीँ हुन्छ धोखाधडी । जसलाई आफंैलाई भन्दा बढी माया, प्रेम र विश्वास खन्याए, उसैबाट पाएको धोखाधडीका कारण डिप्रेसनको मुखसम्म पुगेर तंग्रिएका पात्र… विस्तृत समाचार
जीवन नसोचेको यथार्थ हो । जे सोच्यो त्यो पुग्दैन । जे नसोच्यो त्यही आइलाग्छ । भोग्नै पर्छ । त्यसैले त भनिएको होला समयभन्दा माथि कोही छैन । उसको इच्छाविपरीत केही हुनेवाला छैन । न कोही रोकिन सक्छ न त रोकिन्छ नै संसार ! जिन्दगीका यस्ता भयावह क्षणलाई पार लगाएर आइएको छ जुन सम्झँदा पनि गल्छ नौनाडी । एउटी आमाका लागि उसको कोख रित्तिँदा÷उजाड हुँदा कस्तो… विस्तृत समाचार
दुई/चार अक्षर पढेको र जानेको छु भन्दैमा आफैंले व्याख्या गरेझंै चल्छ र कानुन ? सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्की श्रीमती भिœयाउनेले किन ठूला कुरा गर्नु ? तीज पर्वमा सबै दिदीबहिनी श्रीमान्को दीर्घायुको कामना गर्दै बसेका छन् । तर, विवाह मण्डपमा लगाएको त्यही एक धर्काे सिन्दूरका कारण म भने मर्नु न बौलाउनुको स्थितिमा छट्पटाइरहेको छु । १८ वर्षअघि विवाह बन्धनमा बाँधिएको हुँ, विश्वास थापासँग । लामो समयदेखि चलेको… विस्तृत समाचार
घर–घरमा भेटिन्छन् कथा–व्यथा । फरक यति मात्रै कि कोही देखाउँछन्, कोही लुकाउँछन् । परिवर्तनका खातिर हिजो जो लड्यो राज्यव्यवस्थासँग । आज उही इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा छ । खेल्दै छ, मृत्युसँग पांैठेजोरी । ओहोदामा पुगेकाहरूले फर्किएर हेरेनन् कहिल्यै तल्तिर । कोही सांसद बने, कोही मन्त्री त कोही पुगे राजकीय पदमा । तर, हिजो माओवादी बनेर लड्नेहरूको अवस्था उस्तै छ । कोही कतार त कोही मलेसिया… विस्तृत समाचार
एक धर्काे सिन्दूरका कारण कसरी बर्बाद हुन्छ नारीको जीवन ? जीवनमा भोगेका चोटले नै सिकायो एउटा महत्वपूर्ण पाठ र त फेरिएको छ जीवनको नक्सा । हाय हिजोका ती संकटपूर्ण र बन्धक जीवन ! आज चराझैं स्वतन्त्र छु । घातप्रतिघातको यो दुनियाँमा जहाँ विश्वास गरिन्छ त्यहीँ हुन्छ धोखा । यस्तै धोखाधडी र छलछाममा पारिएकी पात्र हुँ । विवाहका दिन मण्डपमा लगाइएको मंगलसूत्र र तिलहरी नै मेरालागि… विस्तृत समाचार
जीवनमा हामी बन्द भएको एउटा ढोका हेरेर रुन्छौं/कराउँछौं । दिक्क हुन्छौं । तर, हाम्रै अगाडि खुलेका अरू तीन द्वारतिर आँखा पु¥याउँदैनौं । भन्छन् नि विष नभएको सर्प र इख नभएको मान्छेको काम छैन । त्यही इखले हो आज उनको परिचय बदलिएको । हिजो राजधानी खाल्डोमा एकमुठी सास अड्याउनकै लागि जागिर खोज्दै हिँड्ने उनी अहिले आफूजस्तै सयौं अपांगको सहारा बनेकी छन् । यस्तो उदाहरणीय पात्र हुन्… विस्तृत समाचार
१० श्रावण २०७६
एउटा अनाडी डाक्टरका कारण मान्छेको जिन्दगी कसरी तहस–नहस हुन्छ ? कसरी लुटिन्छ खुशी ? र, शिकार होइन्छ मानसिक तनावको ! जल्दोबल्दो उदाहरण हुन् सञ्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरे । जो ग्राण्डी अस्पतालका अनाडी डाक्टरको कारण भोगिरहेका छन् चरम यातना । ४० औं लाख खर्च गर्दा पनि खुशीको दियो (उनीहरूको बच्चा) आज निभ्छ वा भोलि ठेगान छैन । यस्तै खाले प्रताडनाको शिकार भएको पात्र हुँ मिङमार… विस्तृत समाचार
आँखा खोले पीडाले भत्भती पोल्छ र बन्द गरे पनि निको हुन्न । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ दोमिल्लामा जन्मिएँ÷हुर्किएँँ । घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय । तैपनि, बुबाले शिक्षादीक्षामा कुनै कमी हुन दिनु भएन । कक्षा १२ सम्म अध्ययन पूरा गरेँँ । प्लस टु पूरा गरेर भारत गएँ । बुबा (जयराज) देहरादुन चल्ने गाडी चलाउनुहुन्थ्यो । कम्प्युटर क्लासमा भर्ना गरिदिनुभयो उत्तराखण्डको हरिद्वारमा । भारतमा कम्प्युटर सिकेर केही… विस्तृत समाचार